Basikety – CACC: tafakatra amin’ny ampahefa-dalana ny MB2All | NewsMada
Basikety – CACC: tafakatra amin’ny ampahefa-dalana ny MB2All
Niova tamin’ny ora farany ny valin-dalao ho an’ny ekipa malagasy. Taorian’ny faharesena in-telo nisesy, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy, niondrika teo anatrehan’ny MB2All ny Lakers avy any Zimbaboe, omaly.
Na dia ady mafy no natrehana, tafapetraka eo amin’ny laharana fahefatra eo amin’ny vondrona misy azy ny ekipa malagasy miatrika ny lalao CACC any Maputo. Nahazo ny tapakila hiakarana amin’ny lalao ampahefa-dalana, araka izany, ity ekipa tompondakan’i Madagasikara ity. Isa 58 noho 48 no nandavoan’ny malagasy an-dry zareo Zimbaboena nandritra ny fifanandrinan’ny roa tonta. Raha hiverenana ny lalao, nitarika tamin’ny isa 13 no ho 11 ny Lakers tamin’ny ampahefa-potoana voalohany ary hita ho nanana herijika tokoa ity ekipa ity. Tsy nipetra-potsiny anefa ny ekipa malagasy fa nitady izay fomba rehetra hahazoana isa ka nitarika indray ny MB2All tamin’ny ampahefa-potoana faharoa. Tamin’ny alalan’ny isa 26 no ho 21 no nisarahan’ny roa tonta mialohan’ny nidirana tamin’ny fakana aina. Nitohy hatrany ny fampiakarana ny isa ho an’ny Malagasy nandritra ny ampahefa-potoana fahatelo. Nihanitombo ihany koa ny elanelan’isa teo aminy sy ny Lakers avy any Zimbaboe. Nifarana tamin’ny isa 58 no ho 48 ny fifanandrinana ka nivoaka ho mpandresy ny MB2All, ekipa malagasy.
Nanambara ny mpilalao malagasy fa somary henjana ny fiatrehana ny mpifanandrina nandritra izay lalao 4 efa vita izay. “Manana tombony ny ekipa sasany mihoatra amin’ny ekipa malagasy noho izy ireo manatombo amin’ny halavana sy ny traikefa, nefa na izany aza, niady mafy ny mpilalao tsirairay ka tonga amin’izao ampahefa-dalana izao. Raha mitohy ny ezaka, mety ho lasa lavitra amin’ny lalao iraisam-pirenena ny Malagasy”, raha ny nambaran’i Murielle, mpilalao ao amin’ny MB2All.
Miato kely ny fifaninanana ho amin’ny anio, mialohan’ny hidirana amin’ny lalao ampahefa-dalana rahampitso. Ny ekipan’ny Inter Clube avy any Angola no miandry ny ekipa malagasy amin’izany, raha ny hita ao anatin’ny fandaharan-dalao. Ity ekipa ity izay anisan’ny kalaza ka hanano sarotra ny handavoana azy.